Khasaare La Soo Darsay Shirkad Sahamin Shidaal Ka Wadday Maamulka Puntland – Oodweyne Online
Khasaare La Soo Darsay Shirkad Sahamin Shidaal Ka Wadday Maamulka Puntland
odweyneMarch 17, 2015Last Updated: November 30, 2020
London, Uk – Shirkadda Red Emperor ee sahaminta shiidaalka ka waday maamulka Puntland ayaa sheegtay in sahamintaasi ku khasaartay $15 milyan dollar, taas oo xustay in haddii ay sii waddo uu sii kordhi karo khasaarahaasi ay gashay.
Shirkadan oo war-saxaafadeed ka soo saartay shalay magaaladda London ayaa sheegay in khasaarahaasi ay sababtay go’aamo cusub oo ay soo saartay dawladda Soomaaliya oo khuseeya sahaminta iyo maalgalinta ay la galleen maamulka Puntland.
Shirkadan ayaa sheegtay in laba sanno ku darsatay heshiishka inta ay xalinayaan khilaafyadda ka jira dhinacyadda Soomaaliya, isla markaana la xalinayo khilaafyadda siyaasadeed ee dawladda Somaaliya iyo maamulka Puntland ka dhex jira.
Shirkadan ka diiwangashan magaladda London ee dalka UK, ayaa soo bandhigtay lacagaha ay khasaartay oo ah $15.4 million qaybtii hore sanadkan, halkaa sanadkii hore ay shirkadda Red Emperor khasaartay $307,914 guud ahaan. Ka dib markii sharciyo cusub oo ka dhan ah heshiishka aanu galnay soo rogtay dawladda Soomaaliya ayey ku sheegeen qoraalkoodda, iyadoo waxba kama jiraan ku tilmaamtay qandaraasyadda aan soo marin dawladda dhexe ee Soomaaliya.
“Xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa go’amo adag ka soo saartay sharciyada ku saabsan qandaraasyadda shirkadaha sahaminta shidaalka. Oo macnaheedu yahay inay shirkadu hawlaheeda yarayso hawlihii shaqo ka waday gobolka Puntland”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi shirkaddu soo saartay.
“Tix gelinta gaarka ah iyo dedaalada aanu la gelinay illa maanta mamul goboleedka Puntland, heshiiskani oo aanu maamul ahaan ka codsanay maamulka Puntland in muddo laba sano ah naloo kordhiyo mudadii sahaminta si fursad aanu siin lahayn khilaafyada siyaasadeed ee caqabaada ah si loo xaliyo.”ayey qoraalkooda raacisay.
Nuxuur ka mid ah warsaxafadeedka ay shirkadda Red Emperor oo soo baxay maalintii shalay ayaa lagu sheegay in la yareeyo sahaminta iyo maalgalinta ay wadaan taas oo laga dhigo eber si caqabadaha loo xaliyo.
XIGASHO: WARGEYSKA SAXAFI